Semalt कसरी दृश्यतामा फोकस गर्ने र नीलो लिंकहरू होइन भनेर जान्दछ!
हामी सबैलाई थाहा छ कि गुगलको पहिलो पृष्ठमा देखा पर्न सजिलो छैन। तर मलाई केहि भन्न दिनुहोस्, तपाइँलाई के थाहा छ, यदि तपाइँ इन्टरनेटमा तपाइँको कम्पनीको दृश्यतामा शर्त लगाउँनुहुन्न भने, तपाइँले एउटा कुरा महसुस गर्नुहुनेछ: कि तपाइँको ब्रान्ड अनलाइन दुनियाको विशालतामा हराउनेछ।
यद्यपि हामी निरन्तर सुन्न सक्छौं कि दृश्यता उत्पन्न गर्ने रणनीतिहरू अपनाउन कत्ति महत्त्वपूर्ण छ, धेरै ब्रान्डले यसलाई बेवास्ता गर्दछ र अन्तमा अदृश्य हुन्छ।
पृष्ठको दृश्यता त्यो पृष्ठ द्वारा प्राप्त जैविक ट्राफिकको मात्रा हो।
पृष्ठको दृश्यता जति बढी हुन्छ, लि valuable्कहरू उत्पन्न गर्ने क्रममा जति मूल्यवान छ। वेब विकासकर्ताहरू वा वेबसाइट मालिकहरूको लागि केवल ब्लूज लिंकहरू प्राप्त गर्नमा ध्यान केन्द्रित गर्नु खराब अभ्यास हो। यो राम्रो SEO को लागी पर्याप्त छैन।
आजकल, विशेष गरी नयाँ एसईओ प्रवृत्तिको साथ, ब्लुज लि links्कमा मात्र ध्यान केन्द्रित गर्नु आवश्यक पर्दछ, तर साथै सबै भन्दा माथि दृश्यतामा पनि। त्यसो भए SEO दृश्यता के हो? राम्रो एसईओ दृश्यता को मजबुतता के हो? दृश्यताको बारेमा कुरा गर्दा कुन प्यारामिटरहरू ध्यानमा राखिन्छन्? कसरी तपाइँको वेबसाइटको दृश्यतामा अझ राम्रो फोकस गर्ने? Semalt को विज्ञहरु हाम्रो एसईओ एजेन्सीले यी सबै प्रश्नहरूमा प्रकाश ल्यायो जुन हाम्रो लेखको विषय हुनेछ।
SEO दृश्यता के हो?
परिचयमा पहिले नै भनिएझैं हामी परिभाषामा सरल हुनेछौं। पृष्ठको एसईओ दृश्यता त्यो पृष्ठ द्वारा प्राप्त जैविक ट्राफिकको मात्रा हो। पृष्ठको दृश्यता जति बढी हुन्छ, लि valuable्कहरू जति बढी प्राप्त हुन्छन्। अर्को शब्दहरूमा, यो मेट्रिक हो जसले तपाईंलाई क्लिक-थोरै दर देखाउँदछ जुन तपाईंको वेबसाइट कार्बनिक कुञ्जी शब्दहरूबाट हुन्छ। जब कुनै पृष्ठको मूल्याating्कन गर्दछ, मेट्रिक्सलाई दुई प्रकारमा अलग गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ:
- यदि यसले इनबाउन्ड लि measures्कहरू मापन गर्दछ, हामी बलिय मेट्रिक्सको बारेमा कुरा गर्नेछौं।
- यदि यो जैविक यातायात मापन, हामी दृश्यता मेट्रिक्स को बारे मा कुरा गर्नेछौं।
वास्तवमा, प्रत्येक उपकरणको शक्ति नाप्नको लागि आफ्नै सूत्र छ, तर के सबैमा सामान्य हो, उपकरणहरूले संकेत गरिरहेको पृष्ठको सामर्थ्यलाई ध्यानमा राख्नु हो। र लिंकहरू अधिक डोमेनहरू आउँदा मजबूत हुन्छन्। अर्को शब्दमा, सामर्थ्य लि greater्कहरू यदि एकल डोमेनबाट कमजोर लि received्कहरू प्राप्त गरियो भने भन्दा फरक डोमेनहरूबाट फरक डोमेनबाट प्राप्त गरियो भने।
त्यस्तै बिभिन्न दृश्यता मेट्रिक्स सँधै ध्यानमा राख्नुहोस्, एकातिर SERP मा कुञ्जी शब्दका लागि पृष्ठको स्थितिहरू, र अर्को तर्फ, यस कीवर्डले प्रदान गरेको अनुमानित ट्राफिक।
केही शक्ति मेट्रिक्सले "विश्वसनीयता" कारकहरू मार्फत तिनीहरूका सूत्रहरूमा दृश्यता मेट्रिक्स पनि समावेश गर्दछ। यी सूत्रहरू अन्वेषण विशेष गरीरो लाग्दैन, त्यसैले हामी केवल बल र दृश्यता मापन को बारे मा कुरा गर्नेछौं।
बल र दृश्यता
एक पृष्ठ को ताकत को लागी आउने लिंकहरु को संख्या को लागी दर्ता छ र ती लिंक को ताकत। अर्को शब्दमा, जब पृष्ठले धेरै लि links्कहरू प्राप्त गर्दछ र ती लि links्कहरू मजबूत हुन्छन्, यसलाई धेरै सामर्थ्यको रूपमा लिइन्छ। जब यससँग थोरै लिंकहरू वा धेरै कमजोर लि ,्कहरू हुन्छन्, योसँग थोरै शक्ति हुन्छ भनिन्छ।
यद्यपि सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण प्यारामिटर दृश्यता हो। यो कम से कम एक सुरक्षित, दीर्घकालीन रणनीति हो। मानौं कि यदि गुगलले ट्राफिकलाई वेबसाइटमा पठायो भने त्यसो गर्छ किनकि त्यसले त्यस वेबसाइटलाई आदर गर्दछ। म विचार गर्छु कि दृश्यता सूचक हो जुन वेब स्वस्थ छ, कुनै दण्डित गरिएको छैन, प्रयोगकर्ताको प्रतिक्रिया छ, आदि।
यो सत्य हो कि बल महत्त्वपूर्ण छ, तर आदर्श यो हो जब कुनै पृष्ठमा दुबै उच्च मेट्रिक्स र दृश्यता हुन्छ।
दृश्यता भन्दा सामर्थ्य ह्याण्डल गर्न सजिलो छ। पृष्ठ रैंकको दिनदेखि, टेकनिक्सहरू तपाईंको शक्ति कृत्रिम रूपमा, छिटो र सस्तोमा वृद्धि गर्नका लागि परिचित छन्। सामर्थ्य हुनु राम्रो छ, तर यसको मतलब यो पृष्ठ सँधै मूल्यवान छ। सब भन्दा चरम मामला एक वेबसाइट हो कि एक धेरै आक्रामक लिंक बनाएको छ, एक धेरै उच्च AD छ तर दण्डित छ। लिंक धेरै विषाक्त हुन सक्छ, धेरै उच्च ईडीको बावजुद। अर्को चरम मा, जब एक पृष्ठ शक्ति प्राप्त गर्दछ, तर यति सुरक्षित र सकारात्मक प्रयोगकर्ता प्रतिक्रियाको साथ गर्छ, त्यो बल अन्ततः देखिने हुन्छ।
विचारहरू व्यवस्थित गर्नका लागि, हामी types प्रकारका पृष्ठहरू परिभाषित गर्न सक्दछौं र उनीहरूमा भएको मूल्यः
उच्च दृश्यता र प्रतिरोध: महान मूल्यको लिंक।
उच्च दृश्यता र कम शक्ति: कम र उच्च बीचको सकारात्मक मानको साथ सुरक्षित कनेक्शन।
कम दृश्यता र उच्च शक्ति: सम्भावित जोखिमको साथ लिंक। अन्य कारकहरू विश्लेषण गर्नुहोस् कि यो सुरक्षित छ कि छैन भनेर। यदि त्यस्तो हो भने, लिंकको मध्यम मूल्य हुनेछ।
कम दृश्यता र प्रतिरोध: समान आवास, उस्तै जोखिम। तर यदि यो सुरक्षित भएको भए, यो कम मूल्यको हुने थियो।
एक पृष्ठको सामर्थ्य बढाउनु लि is्क निर्माणको लक्ष्य हो
त्यहाँ एक पृष्ठको शक्ति मापन गर्न विभिन्न मेट्रिक्स वा उपकरणहरू छन्। सबैभन्दा अधिक प्रयोग डोमेन प्राधिकरण (DA), पृष्ठ प्राधिकरण (PA) र पृष्ठ रैंक (PR) हो, यद्यपि त्यहाँ अधिक छन्, धेरै उपकरणहरू वेबसाइटमा आगमन लिंकहरू मापन गर्न सक्षम छन्। अर्को उदाहरण URL वा Ahrefs डोमेन श्रेणी हुनेछ।
शक्ति स्थिति को लागी आवश्यक छ, तर प्रयोगकर्ता संग एक प्रतिक्रिया संगै हुनु पर्छ। अर्को शब्दहरूमा: प्रयोगकर्ता प्रतिक्रिया शक्ति दृश्यता मा रूपान्तरण।
यस लेखमा, शब्द लि links्कको अर्थमा मात्र प्रयोग हुनेछ। अर्कोतर्फ, अरूले यो शब्द थोरै फरक तरिकाले प्रयोग गर्दछ, जस्तै कारकहरू सहित वेबसाइटको गुणवत्ता वा ट्राफिक।
हामी कसरी लि link्कको गुणस्तर मापन गर्छौं?
यो नोट गर्न धेरै महत्त्वपूर्ण छ कि सबै एसईओ कम्पनीहरूले लि link्कलाई एकै तरीकाले मूल्याate्कन गर्दैन। धेरै खोज ईन्जिनहरू केवल सामर्थ्य उपायहरू विचार गर्छन्; यद्यपि अन्यले दृश्यता मानहरू समावेश गर्दछ। कहिलेकाँही, यी मूल्या strategy्कनहरू रणनीतिको प्रकारसँग सम्बन्धित हुन्छन् जुन पछ्याईन्छ, किनकि यसले उच्च वा कम जोखिम (कालो, खरानी वा वाइट टोपी) प्रस्तुत गर्दछ कि हुँदैन भन्नेमा निर्भर गर्दै, कुनै व्यक्तिले निश्चित प्यारामिटरहरू वा अन्यको लागि हेर्न सक्छन्।
यो अर्को पक्ष हो जुन लिंकको मानको विश्लेषण गर्दा सँधै मूल्यवान हुँदैन: आउटगि links लिंकहरू जुन पृष्ठमा पहिले नै भएको थियो (तपाईं Ahrefs द्वारा जाँच गर्न सक्नुहुनेछ)। त्यहाँ एक पक्ष छ जुन बुझ्न सजिलो छ:
एक पृष्ठ वितरण बल अनन्त छैन।
हामीलाई कम्तिमा थाहा छ कि आउटगि links लिंकहरूको निश्चित संख्याबाट, यसले यसको अधिकतम शक्ति सार्न सक्दैन। यदि यो मामला हो भने, पृष्ठमा बाहिर जाने बल भिन्नतामा परिणत हुनेछ र असीम रहनेछ। तपाईलाई केवल बुझ्नु पर्छ कि आउटबाउन्ड लिंकहरूको प्रभावको संख्या।
पृष्ठमा २ वा out आउटगोइ links लिंकहरू भए पनि फरक पर्दैन, तर त्यहाँ १० वा out०० बाहिर जाने लिंकहरू छन् र त्यसैले यो किन एउटा प्यारामिटर हो जुन हामीले हाम्रो विश्लेषणमा समावेश गरेका छौं।
आउटबाउन्ड लिंकहरू बलपूर्वक
आउटबाउन्ड लिंकहरूको संख्याको बारेमा निष्कर्षहरू निकाल्न, तपाईंले पृष्ठको सामर्थ्यलाई विचार गर्नुपर्नेछ।
उदाहरण को लागी, यदि एक निर्देशिका को लागी2लाख भन्दा बढी आउटबाउन्ड लिंक (मात्र डोमेनहरु गणना गर्दै), तर यो DA 94 छ, तब यो यति धेरै लाखौं पृष्ठहरुमा वितरण गर्न पर्याप्त बलियो छ।
वास्तवमा, राम्रो अभ्यास भनेको आगमन र बहिर्गमन लिंकहरूको तुलना गर्नु हो। यदि अनुमानहरू टाढाबाट वा अझ स्पष्ट रूपमा जीते भने, यदि त्यहाँ धेरै अनुमानहरू छन् तर पृष्ठमा थोरै शक्ति छ भने, स्पष्ट रूपमा यो यत्तिको प्रसारित गर्न सक्षम हुनेछैन।
सेक्सन द्वारा बाहिर जाने लिंकहरू
डोमेनमा लिंकहरूको कुल संख्या मात्र महत्त्वपूर्ण छ, तर तपाईंको लिंक अवस्थित रहेको सेक्सनमा लिंकहरूको संख्या। यदि तपाईंको लिंक १०० अन्यहरूसँग देखा पर्‍यो भने, यो उचित मान्दैन कि १०० ले त्यति धेरै शक्ति प्राप्त गर्दछ जस्तो कि त्यहाँ १ मात्र थिए: तर यो विचार गर्नु पनि एक मान हो।
कभरेज दूरी र सेक्सन ताकत
तपाईंले सायद यो पहिले नै बुझिसक्नुभएको छ वा तपाईंलाई यो थाँहा छ, तर तपाईंले यो लेखमा यो याद गर्नुपर्छ। वास्तवमा तपाईको लिंकको स्थान महत्वपूर्ण छ। तपाईंको लिंक मजबूत छ यदि यो एक मजबूत अनुभाग मा छ। किनभने यो प्राकृतिक हो।
कभर वा एउटा लेख वा मुख्य कोटीबाट लि्कको एकल क्लिक भन्दा बढी मान हुन्छ जुन आवरणबाट धेरै पटक लुकाइएको हुन्छ वा लिंक गरिएको छैन।
स्पष्ट उदाहरण भनेको प्लेटफर्म हो जुन तपाईंलाई आफ्नै प्रोफाइल सिर्जना गर्न र तपाईंको लिंक राख्न अनुमति दिन्छ। यी पृष्ठहरू DA 90-100 सँग छन्, तर कुन प्रोफाइलसँग पीए १ छ वा १ नजिक छ। यी मामिलाहरूमा डीएले खास फरक पार्दैन, तर पीए, अर्थात शक्ति त्यो भागमा पुग्छ, जुन प्रायः शून्य हुन्छ।
दृश्यता बिना गुणस्तर
त्यहाँ परिस्थितिहरू छन् जुन पृष्ठमा गुगलको सबै आदर हुन्छ तर जैविक ट्राफिक हुँदैन। उच्च प्रयोगकर्ता प्रतिक्रियाको साथ, पृष्ठको साथ कल्पना गर्नुहोस्, तर पृष्ठमा SEO बिना र कुञ्जीहरूलाई हमला नगरी। यो पृष्ठ धेरै मूल्यवान हुनेछ, तर गुगलले यसलाई ट्राफिक पठाउँदैन।
यस प्रकारको पृष्ठको उदाहरण केहि व्यक्तिगत ब्लगहरू छन्, उदाहरणका लागि, हास्य। त्यहाँ दर्जनौं दैनिक भ्रमणहरू प्राप्त गर्ने ब्लगका धेरै केसहरू छन्, एक डीए 40० छ, धेरै उच्च प्रयोगकर्ता प्रतिक्रिया छ, तर जहाँ ब्लगरले एसईओको वास्ता गर्दैन वा आफ्ना प्रकाशनहरूलाई अनुकूलित गर्दछ। यो अप्टिमाइजेसनको अभावका कारण दृश्यता बिनाको पृष्ठ हो तर जुन यसलाई योग्य छ, लिंक सिर्जनाको लागि पनि उपयोगी छ।
यो एकदम व्यक्तिपरक हो र मूल्यांकन पृष्ठमा भएको ज्ञानमा निर्भर गर्दछ। यो परिदृश्यको विशेष केस हो जुन हामीले अगाडि उल्लेख गर्यौं "दृश्यता बिना बल"। यो विश्लेषण गर्ने हाम्रो क्षमता हुनेछ कि पृष्ठमा लिंक गर्न मूल्य छ कि छैन भन्ने निर्धारण गर्दछ। हामीले आफैलाई सोध्नुपर्ने प्रश्न यो हो: "के हामीसँग दृश्यता छैन किनकि SEO काम गर्दैन वा Google ले हामीलाई मनपर्दैन?"
पोर्टलहरू र ब्लग प्लेटफर्महरूमा ब्लगहरू
ब्लगर वा वर्डप्रेस जस्ता ब्लग प्लेटफर्महरूमा, साथै ठूला पोर्टलमा जुन तपाईंलाई तपाईंको आफ्नै ब्लग सिर्जना गर्न अनुमति दिन्छ, हामीले मापन गर्न आवश्यक बल डोमेनको शक्ति होइन तर हाम्रो ब्लगको सामर्थ्य हो।
उदाहरण को लागी, DA 97 with को साथ ब्लगर। यो स्पष्ट छ कि ब्लग सिर्जना गर्दा यो शक्ति संचारित हुँदैन। यो सामान्यतया स्पष्ट र अधिक हुन्छ जब ब्लगहरू उप-डोमेनमा सिर्जना गरिन्छ भने मुख्य भन्दा फरक हुन्छ, तर हामी अझै यो याद राख्न चाहान्छौं।
यी प्रकारका ब्लगहरूलाई अलि बढी अवलोकनको साथ मूल्या .्कन गर्नुपर्छ। हामी खुशीको साथ डोमेनको एडी प्रयोग गर्न सक्दैनौं, तर हामीले गर्नुपर्नेछ शक्ति विश्लेषण यसले प्राप्त गर्दछ, अर्थात् लिंकहरू यसले डोमेनबाट प्राप्त गर्दछ।
खोज इञ्जिन अप्टिमाइजेसन वा एसईओ तपाईंको रणनीतिहरूमा दृश्यता प्राप्त गर्न को लागी सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र प्रभावकारी तरीका हो। राम्रो एसईओ रणनीति भएको र तपाईंको पृष्ठ अप्टिमाइज गरिएको तपाईंलाई अधिक प्रयोगकर्ताहरूमा पुग्नेछ जसले तपाईंलाई चिन्न सक्दैनन्।
राम्रो रणनीतिको साथ खोज इञ्जिनहरू जित्नुहोस् र तपाईंको दृश्यता बढाउन पहिलो पृष्ठहरूको बीचमा आफैंलाई व्यवस्थित गर्नुहोस्।
किनकि हामीलाई थाहा छ, तपाईं चाहनुहुन्छ कि तपाईंको वेबसाइट खोज ईन्जिनमा राम्रोसँग देखा पर्न; आज Semalt ले तपाईंलाई यी आवश्यक रणनीतिहरूको साथ तपाईंको कम्पनीको अनलाइन दृश्यता वृद्धि गर्न छोड्छ।
यस अनुशासनका सबै पक्षहरूलाई कभर गर्न, लि link्कको मान कसरी मापन गर्ने भन्ने कुराको बारेमा कुरा गर्न आवश्यक छ, किनकि यदि हाम्रो लि strategy्क निर्माण रणनीति सफल हुनको लागि यो राम्रोसँग गर्नुपर्नेछ। लि evalu्कको मूल्याate्कन गर्न, हामीले गर्न सबै भन्दा पहिले हामीले आउनु पर्ने पृष्ठ मूल्या evalu्कन गर्नुपर्दछ र त्यो कार्य गर्नको लागि हामीले एसईओ मेट्रिक्सको सेट परिभाषित गर्नुपर्दछ र उपकरणहरू पनि जान्नुपर्दछ जसले हामीलाई यी मेट्रिक्सहरू प्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ।